Konke malunga nesiqhumiso kunye neemodyuli zePokémon Go | IPhone iindaba
Konke malunga nesiqhumiso kunye neemodyuli zePokémon Go
I-Pokémon Go inezinto ezininzi eziza kusivumela ukuba sizingele i-Pokémon ngokukhawuleza kwaye ngokulula, phakathi kwezi zinto sisiqhumiso kunye neemodyuli zePokeStop. Siza kukuxelela yonke into oyifunayo malunga nesiqhumiso kunye neemodyuli zePokeparadas zePokémon GoNgale ndlela uya kufumana okuninzi kwezi zinto zibekwa ngumdlalo kuthi kwaye zingasivumela ukuba senze konke okusemandleni ngomzuzu nesicelo esivulekileyo, ngamava anyukayo kunye nokugcinwa kwebhetri oku kuthetha oku. Ngelishwa ayizizo izinto ezimbini ezigcweleyo, kwaye kunzima ukuzifumana.
2 Iimodyuli zePokeparada
Isiqhumiso sesinye sezona zinto zidumileyo nezona ziluncedo kwiPokémon Go, ngelishwa asizukuyifumana kwiPokeStop, ubuncinci hayi rhoqo, sihlala siyifumana xa siqhubela phambili kwinqanaba okanye xa siyithenga ngePokecoins ( ngokutshintshiselana ngemali yokwenyani). Isiqhumiso siya kutsala iPokémon kwindawo yethu, sisivumele ukuba sibabambe ngaphandle kobunzima kakhulu. Oku kuhle xa sikwindawo enye okanye ezingaphezulu kwePokémon engekayibambi kwaye sifuna ukuyongeza kwiPokedex yethu.
Isiqhumiso siya kutsala iPokémon kwindawo yethu nokuba simi okanye sihamba. Kwimeko yokuba Ukuma kuya kutsala iPokémon rhoqo emva kwemizuzu emihlanu okanye njalo. Kwimeko yokuba ngokunyakaza siya kuba nakho ukubona iPokémon entsha yonke imizuzu okanye phantse zonke i-200 yeemitha esizihambileyo. Ngale ndlela, umdlalo uya kuzuza kwabo bafuna i-Pokémon. Isiqhumiso sithatha imizuzu engama-30 iyonke.
Ezi modyuli ziyafana nesiqhumiso, umahluko wokuba zinokubekwa kuphela kwiPokeStops. Ukuzibeka, siza kucofa kwi-dash emhlophe ngaphezulu kwevili kwindawo yokumisa, kwaye iimodyuli zethu ezikhoyo ziya kuvela. Oku kuya kutsala yonke i-Pokémon kule ndawo, kodwa ayisiyiyo eyomnini kuphela, kodwa kuye nawuphi na umsebenzisi ofuna ukusondela.
Iimodyuli zePokeparada zikhethekileyo kwiindibano zabahlobo kunye neePokeparadas, kwaye njengempepho iphelele isiqingatha seyure. Ngokubhekiselele kwidatha yokubonakala, asinayo, kuba ngamanye amaxesha ukuya kwi-Pokémon ezintathu okanye ezine zivela kanye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Konke malunga nesiqhumiso kunye neemodyuli zePokémon Go
Masibuyele kunyaka we-2016. Enkosi ngomso siza kuqala ukudlala iitazos emva koko sibone i-dragomball
Khupha intonga kwi-esile lakho, mfondini. Ndiyakuqinisekisa ukuba uphila ngcono.
I-Tazos isekhona kwaye i-Dragon Ball inoluhlu olutsha emoyeni… Kubonakala kum ukuba sikwi-2016!
Yiza kamnandi uye kwibala lesikolo ukuze udlale amaphiko emabhile
Ungazicima njani i-backups esinazo kwi-iCloud
Ababesakuba ngabasebenzi beApple bazisa iimpahla ezimdaka